Song Hye Kyo နှငျ့ Hyun Bin တို့ပွနျတှဲနပေီလို့ ဘာကွောငျ့ပရိတျသတျတှထေငျနကွေတာလဲ | News Bar Myanmar
Song Hye Kyo နှငျ့ Hyun Bin တို့ပွနျတှဲနပေီလို့ ဘာကွောငျ့ပရိတျသတျတှထေငျနကွေတာလဲ
ပရိတျသတျအခြို့ဟာ Sing Hye Kyo နှငျ့ Hyun Bin တို့ဟာ ပွနျတှဲနကွေပီလို့ ထငျကွေးပေးနကွေပါတယျ။ အဲ့လိုထငျရတာလညျး သူတို့မှာသကျသတှေရှေိလို့ လို့ ဆိုနကွေပါတယျ။ သူတို့နှဈဦးဟာ ၂၀၀၈ ခုနှဈတှငျ The world they live in ဆိုသညျ့ဇာတျလမျးတှဲတှငျ တူတူပါဝငျ သရုပျဆောငျဖူးပါတယျ။
၂၀၀၉ မှာတော့ မငျးသား Hyun Bin နှငျ့ မငျးသမီး Song Hye Kyo တို့ဟာတှဲနပေီဖွဈကွောငျး သတငျးမြားပျေါပေါကျခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၁ ခုနှဈမှာတော့ လမျးခှဲခဲ့ပီး Hyun Bin ကလညျး စဈတပျထဲသို့ ဝငျသှားခဲ့ပါတယျ။ လတျတလောတှငျတော့ ပရိတျသတျမြားက Song Hye Kyo နှငျ့ Hyun ဟာ ပွနျလညျစုံတှဲခုတျနပေီဟု ထငျနကွေပါတယျ။ အကွောငျးအရငျးမှာတော့ …
၁. Song Hye Kyo ၏ instagram တှငျတငျခဲ့သော ဓာတျပုံထဲရှိ နရောသညျ Hyun Bin ရိုကျကူးရေးလုပျနသေော နရောနှငျ့ ဆငျတူနသေောကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
၂။ Song Hye Kyo ၏ အရငျးနှီးဆုံး သူငယျခငျြးဖွဈသော Park Sol Mi က Song Hye Kyo နှငျ့ Hyun Bin တူတူသရုပျဆောငျခဲ့သော The world they live in ဇာတျလမျးတှဲ၏ သီခငျြးကို Screenshot ရိုကျကာ သူ့၏ IG တှငျတငျခဲ့ပါသညျ။
အဆိုပါ Post ၏အောကျတှငျ Song Hye Kyo မှ “Sister…… Hahaha”ဆိုပီး comment ဝငျမနျ့ခဲ့ပါတယျ။ ထိုကိစ်စနှငျ့ ပကျသကျပီးပရိတျသတျမြားက Park Sol Mi အားမေးမွနျးကွရာ comments section ကိုပါပိတျလိုကျပီး Post ကိုပါဖကျြခဲ့သဖွငျ့ လူအမြားအား ပို၍သံသယဝငျသှားစခေဲ့ပါတယျ။
၃။Song Hye Kyo ၏ လညျပငျးတှငျ ဝတျထားသော ” S.H”ဆိုသညျ့ အတိုကောကျ စကားလုံးနှဈလုံးပဲ ဖွဈပါတယျ။ တခြို့ပရိတျသတျမြားကတော့ ဒါဟာ Song Hye Kyo ၏နာမညျအတိုကောကျလညျး ဖွဈနိုငျတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။
သူတို့နှဈယောကျတကယျတှဲနလေား မတှဲနဘေူးလား ဆိုတာတော့ ဘယျသူမှသခြောမပွောနိုငျသေးပေ။ ပရိတျသတျကွီးရော အပျေါမှာ ဖျောပွခဲ့တဲ့ အခကျြအလကျမြားအရ ဘယျလိုထငျမွငျမိကွပါသလဲ။ Comments section တှငျ ပါဝငျဆှေးနှေးနိုငျပါတယျနျော။
(Zawgyi) Song Hye Kyo နှင့် Hyun Bin တို့ပြန်တွဲနေပီလို့ ဘာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေထင်နေကြတာလဲ
ပရိတ်သတ်အချို့ဟာ Sing Hye Kyo နှင့် Hyun Bin တို့ဟာ ပြန်တွဲနေကြပီလို့ ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။ အဲ့လိုထင်ရတာလည်း သူတို့မှာသက်သေတွေရှိလို့ လို့ ဆိုနေကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် The world they live in ဆိုသည့်ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် တူတူပါဝင် သရုပ်ဆောင်ဖူးပါတယ်။
၂၀၀၉ မှာတော့ မင်းသား Hyun Bin နှင့် မင်းသမီး Song Hye Kyo တို့ဟာတွဲနေပီဖြစ်ကြောင်း သတင်းများပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာတော့ လမ်းခွဲခဲ့ပီး Hyun Bin ကလည်း စစ်တပ်ထဲသို့ ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလောတွင်တော့ ပရိတ်သတ်များက Song Hye Kyo နှင့် Hyun ဟာ ပြန်လည်စုံတွဲခုတ်နေပီဟု ထင်နေကြပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းမှာတော့ …
၁. Song Hye Kyo ၏ instagram တွင်တင်ခဲ့သော ဓာတ်ပုံထဲရှိ နေရာသည် Hyun Bin ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေသော နေရာနှင့် ဆင်တူနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Song Hye Kyo ၏ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်သော Park Sol Mi က Song Hye Kyo နှင့် Hyun Bin တူတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့သော The world they live in ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ သီချင်းကို Screenshot ရိုက်ကာ သူ့၏ IG တွင်တင်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ Post ၏အောက်တွင် Song Hye Kyo မှ “Sister…… Hahaha”ဆိုပီး comment ဝင်မန့်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပက်သက်ပီးပရိတ်သတ်များက Park Sol Mi အားမေးမြန်းကြရာ comments section ကိုပါပိတ်လိုက်ပီး Post ကိုပါဖျက်ခဲ့သဖြင့် လူအများအား ပို၍သံသယဝင်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
၃။Song Hye Kyo ၏ လည်ပင်းတွင် ဝတ်ထားသော ” S.H”ဆိုသည့် အတိုကောက် စကားလုံးနှစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ပရိတ်သတ်များကတော့ ဒါဟာ Song Hye Kyo ၏နာမည်အတိုကောက်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်တကယ်တွဲနေလား မတွဲနေဘူးလား ဆိုတာတော့ ဘယ်သူမှသေချာမပြောနိုင်သေးပေ။ ပရိတ်သတ်ကြီးရော အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်အလက်များအရ ဘယ်လိုထင်မြင်မိကြပါသလဲ။ Comments section တွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်နော်။
Next BLACKPINK နဲ့ Lady Gaga ရဲ့ Sour Candy ထပျခြိုးလိုကျနိုငျတဲ့ စံခြိနျသဈမြား »
Previous « လူတိုငျးကို ပါးစပျအဟောငျးသားဖွဈသှားစသေော Seo Kang Joon ၏ Idol ဘဝမှ ထိပျတနျးမငျးသားဘဝဆီသို့ လြှောကျခဲ့တဲ့လမျး